XOG: Sheekh Shaakir oo si qarsoodi ah loo keenay Muqdisho lana dajiyay Villa Soomaaliya -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Sheekh Shaakir oo si qarsoodi ah loo keenay Muqdisho lana dajiyay...
XOG: Sheekh Shaakir oo si qarsoodi ah loo keenay Muqdisho lana dajiyay Villa Soomaaliya
Madaxa xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, ayaa socdaal qarsoodi ah ku yimid Muqdisho.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in mid kamid ah hogaamiyeyaasha ururka Ahlu Sunna la dejiyey Villa Soomaaliya.
Macluumaadka ayaa muujinaya in uu wada hadalo la yeelan doono madaxda ugu sareysa ee dowlada federaalka ah.
Socdaalkan ayaa kusoo aadaya xili la sheegayo in uu khilaaf xoogan u dhaxeeyo Nabad iyo Nolol si lamid ah Ahlu Sunna.
Ismaandhaafkaas ayaa ku saabsan doorashadda Galmudug oo la qorsheynayo in maalmaha soo aadan si rasmi ah u bilaabato.
Villa Soomaaliya ayaa damacsan in ay doorashadda Galmudug ka hesho madaxweyne daacad u ah, kaasoo fuliya danaheeda coddeynta 2020-ka.
Previous articleGuddiga doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo la magacaabay
Next articleXOG: Imaaraadka Carabta & DF Oo Isku Heysta Puntland & Cida Ku Gacan Sareyneysa
Dagaal Khasaaro gaystay oo gobolka Hiiraan ku dhex maray Kooxda Macawisleyda...